Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Hadlay Doorashada Golaha Deegaanka – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN) Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa ka hadlay doorashada golayaasha deegaanka iyo doorka ay xukuumaddiisu ku lahayd suurta galnimada doorashadaa. sidoo kale wuxuu ka hadlay mawqifkooda xisbi ahaan ee
natiijada. wuxuuna sidaa ku sheegay fariin qoraal iyo cod ah oo uu bulshada u mariyay caawa warbaahinta.
Qoraalkaa ayaa u qornaa sidan:” Bulshada Somaliland dibed iyo gudaba waxaan idinku salaamaya salaanta Islaamka, “ASSALAAMU CALAYKUM WA RAXMATULAAHI WA BARAKAATU”.
Dadka Somaliland meel kaste oo aad joogtaan waxaan idiin rajaynayaa guul, waxaan idinku amaanayaa dedaalka iyo isku-duubnida, waxaana inoo ballana illaalinta qaranimada iyo wadaniyada.
Aniga iyo Xisbigaygu waxaan balanqaadaynaa in aanu aqbali doono natiijada doorashada. Xisbiyada/Ururada waxaan ugu baaqayaa in ay aqbalaan wixii ka soo baxa, sharcigana u hogaansamaan una hambalyeeyaan ciddii ku guulaysata. Dalkan mas’uuliyadiisa, Sharciyadiisa, nabadgelyadiisa anigaa xilkiisu isaaran-yahay, mana aqbali doono cidii sharciga ku xad-gudubta, cidii nabadgelyada dhaawacda, cidii jiritaanka iyo masiirka ummadan ka hortimaada.
Bulshada reer Somaliland waxaan leeyahay ilaashada Qaranimada, gacanna ka siiya Hay’adaha amaanka gudashada xilkooda.
Burco: Goobjoogayaal Ku Dhaawcmay Rabshad Ka Dhacday Xarunta Komishanka, Dadweynaha Oo Safaf Dhaadheer Caawa U Galay Codbixinta Subaxnimada Bilaabmay